Laser Cutting of Sublimation nezemidlalo, Fitness Clothing, Digital Ishicilelwe nezambatho - Wuhan Golden Laser Co., Ltd
Metal Dual Sheet & Tube Cutting
Laser Cutting of Sublimation nezemidlalo, Fitness Clothing, Digital Ishicilelwe nezambatho
Vision Laser Ukucanda ukuba Industry Sublimation nezambatho
High speed Flying ukuvavanya esongwayo sublimated kwilaphu uthabathe ingqalelo nayiphi na shrinkage okanye ubugqwetha ezingenzeka ngethuba lenkqubo sublimation ngokuchanileyo usike nayiphi zokwakha.
Idayi-sublimation phuhliso Driving Fashion, Fitness and Sports Clothing Industry.
Nezambatho kunye izincedisi ukuba fashion-phambili, kwi-mkhuba lo gama ngaxeshanye ekhululekile kwaye esebenza ibisoloko yathathwa. impahla Sublimated inikeza yonke loo nangaphezulu.
Imfuno ubuntu elikhethekileyo kengoku yefashoni kwishishini lempahla liye negalelo kakhulu ukuthandwa yokunxiba sublimation. Hayi nje kushishino lwefashoni kodwa nkqu ngokuthanda activewear, ukufaneleka iimpahla nezambatho zemidlalo kwakunye namashishini iiyunifom ithathe enkulu kule ndlela yoshicilelo ngedayi-sublimation inoveli kuba kunika amathuba amaninzi ulwenziwo kunye neze umda zoyilo.
showroom umthengi Wethu
Laser nangokukrola imizila dayi-sublimation
Laser isithole isicombululo ukusika uthandwayo kushishino nezemidlalo. Njengeyunivesithi ehamba phambili kumthengisi laser ngenxa noshishino lwempahla eyolukiweyo, Golden Laser laqalisa inkqubo ukusika umbono laser ngesantya esiphezulu for speed top amalaphu eziphathwa sublimation kwi rolls ngokuzenzekelayo. Nge ezintsha eqhubekayo, Golden Laser usoloko ijolise ekudaleni ixabiso elikhulu abaxumi bethu.
isicelo laser okufana sublimation nezemidlalo
Jersey (basketball ijezi, ijezi ekhatywayo, baseball ijezi, hockey)
Dance ukuguga / Yoga banxibe
Laser nangokukrola eprintiweyo sublimation nezemidlalo
Inkqubo AGENDA UMBONO laser automates inkqubo ngokusika amaqhosha ngedayi sublimation eshicilelweyo ilaphu okanye ze-textile ngokukhawuleza ngokuchanileyo, uyamelana naziphi igqwethwe kunye ukuzolula ukuba kwenzeka lokuthunga obungazinzanga okanye stretchy efana abo asetyenziswe nezemidlalo.
Laser nangokukrola idayi-sublimation hockey ijezi
0.5mm ukusika ngqo
Funda ngakumbi ngombono laser mgawuli
Laser nangokukrola activewear sublimated
UMBONO laser AGENDA ezilungele ukusika nezemidlalo ngakumbi ngenxa yekhono layo ukunciphisa izinto stretchy kwaye lula zonakaliswa - kanye uhlobo ukuba ufumana impahla lweembaleki (umz ijezi iqela, kaSipho njl)
Ziziphi iingenelo laser ukusika?
- All in oluzenzekelayo, ixabiso ngaphantsi
Cutting quality edge
Hayi, ngenxa yokuba licwecwe laser processing
Tsala on ezibonakalayo?
INDLELA UMBONO laser mgawuli ESEBENZA?
MAX UMSEBENZI 1
→ scan kubhabho
Lula inkqubo yonke imveliso. nangokukrola oluzenzekelayo for amalaphu roll
Gcina isixhobo neendleko zabasebenzi
output High (500 Iiseti ijezi ngosuku shift nganye - kuphela reference)
Akukho efunekayo iifayile yemizobo yokuqala
MODEL UMSEBENZI 2
→ AMANQAKU UBHALISO scan
Ngokuba izinto ezithambileyo lula ukuba bazichaze curl, ukwandisa
Kuba indlela elukhuni, ipateni oluzalela ngaphakathi ulwandlalo kunye ngqo eliphezulu iimfuno ahlabayo
Yintoni Vision Laser eziluncedo System?
HD iikhamera industrial
Cameras scan eli laphu, ukubhaqa qaphela aya yashicilelwa, okanye achole kumanqaku zobhaliso wabagawula zoyilo Abanyulwa bakhe isantya nokuchaneka.
Eqondile laser ukusika
ukusika ezichanekileyo ngesantya esiphezulu. imiphetho cut Ukucocwa ogqibeleleyo - akukho kwakhono lika amaqhekeza ahlabayo kuyimfuneko.
Inkqubo Umbono Laser kuvala ngokuzenzekelayo ukuba naziphi igqwethwe okanye ukuzolula kwi naliphi ilaphu okanye namalaphu.
yokuthutha kunye auto feeder ngenxa ngokupheleleyo-oluzenzekelayo laser processing ngqo ukusuka kuluhlu.
Sincoma iinkqubo laser elandelayo
kwishishini nezemidlalo digital eshicilelweyo:
Golden Laser uye waphononga ngokunzulu iimfuno yezolimo kwinkalo nezemidlalo, kwaye iye yasungula uthotho izisombululo laser processing automated ukuphucula umgangatho kulungiswe nezemidlalo, yenza inkqubo yemveliso elula, usindisa ixesha elininzi zabasebenzi kunye nexesha nendleko.
OMKHULU CAD Vision Uvavanyo Laser Cutting Machine
ubhaliso OMKHULU cam Camera Laser wokusika Machine
Speed ​​High Galvo & Gantry Laser Perforating kunye Cutting System
Okunye Imishini Laser
OKO KUTHETHWA NABAXUMI SAY?
"Ayikho into ngokukhawuleza ngaphezu kulo matshini, nto kulula kulo matshini!"
Thina a epheleleyo technology laser processing, kuquka laser ukusika, laser ngentlabo, laser perforating kunye laser ukumakisha.
Fumana imishini yethu laser
Yintoni na indaba zenu?
Hlola izixhobo zakho, ukwandisa le nkqubo, ukunikeza ividiyo, parameters processing, yaye ngaphezulu, ngaphandle kwentlawulo.
Yiya isampula kwigalari
Yintoni abakwicandelo lakho?
Nzulu iimfuno zamashishini, kunye nezisombululo isicelo laser ngokuziphatha ezikrelekrele ukunceda abasebenzisi ukusungula nokuphuhlisa.
Yiya izisombululo kushishino
Copyright © 2005-2019 Wuhan Golden Laser Co., Ltd. All Rights Reserved. - Kuxhaswe Globalso.com